Abathengisi Banjengawe Bakhetha Kanjani Umhlinzeki We-Marketing Automation? | Martech Zone
NgeSonto, Septhemba 28, 2014 Douglas Karr
Sibhale ngokuqonda okuxekethile okuzungezile lokho okuzenzekelayo kokumaketha, futhi sabelane ngamanye amafayili we- Izinselelo ze-B2B ku-automation yokumaketha umkhakha. Lokhu infographic evela kuMarketo, ohlanganyele no Iseluleko se-Software, babelane ngale infographic lapho bahlanganisa khona imiphumela yamakhulu ezinkampani ukunquma ukuthi yini eqhuba izinhlangano ukuthi zithenge izinhlelo ezisebenzisayo zokumaketha.
Ubuwazi ukuthi ama-91% wabathengi ahlola ukuzenzakalela kokumaketha okokuqala ngqa? Lokhu akusimangalisanga, njengoba sazi ukuthi ukumaketha okuzenzakalelayo kuyanda kakhulu unyaka nonyaka — izinkampani eziningi ziyaqonda ukuthi ukuze ziqhubeke nokuncintisana, ukuzisebenzisela ukumaketha kuyadingeka. Okunye okutholakele okungukhiye ukuthi isizathu esikhulu sokuthi izinkampani zihlole isoftware yokuthengisa ezenzekelayo ukuthuthukisa ukuphathwa kokuhola nokwenza izinqubo ezenzakalelayo. UDayna Rothman, uMarketo
I-infographic iphendula imibuzo emi-3 ejwayelekile… ngubani, ngani nokuthi yini wokumaketha okuzenzakalelayo:
Ngubani ofuna isoftware yokumaketha?
Kungani izinkampani zifuna isoftware yokuthengisa ezisebenzelayo?
Yini amandla aceliwe kakhulu kusoftware yokuthengisa ezenzakalelayo?
Iseluleko sethu kuphela lapho ukhetha umhlinzeki wokuzenzakalela wokumaketha yilokhu… ungaphumi uyobuza Yini Isixazululo Esihamba Phambili Sokumaketha?. Abahlinzeki bezokumaketha bezokumaketha bonke bayahluka ekubhekeni kwezici zabo, izinzuzo, nezinqubo abazisekelayo. Izeluleko zethu ezinkampanini ukuthi ziqale zibalaze izinqubo zakho zokumaketha ukuthola, ukugcinwa kanye namathuba we-upsell bese udweba lezo zinqubo kusoftware yokuthengisa ezisebenzelayo. Khetha isoftware ebests isekela izinqubo zakho. Futhi ungaphuli ibhange ngesixazululo, uzodinga i- izinsizakusebenza eziningi zokusebenzisa isisombululo sokumaketha kunokuvele ubhalisele isevisi!
Tags: izinqubo ezizenzakalelayoabaphathi abaholayoizici zokuzenzakalela zokumakethaizimboni zokumaketha ezenzekelayoukuhlanganiswa kokuzenzakalela kokumakethaisoftware ezenzakalelayoizitayela zokumaketha ezenzekelayoumabhebhanaiseluleko se-software